सार्थक काम; चुरोट पिउन छोड्नेलाई ६० हजार रुपैयाँ पुरस्कार ! जान्नुहोस – Ramailo Sandesh
सार्थक काम; चुरोट पिउन छोड्नेलाई ६० हजार रुपैयाँ पुरस्कार ! धुम्रपानको दर घटाउन एउटा सहरमा पाइलट काउन्सिल योजनाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। जसमा धुम्रपान छाड्ने व्यक्तिलाई करिब ३० हजार रुपैयाँ नगद दिने व्यवस्था छ।
साथै, यो योजना अन्तर्गत गर्भवती महिलाहरूलाई दोब्बर रकम दिइनेछ। यो योजना बेलायतको एउटा सहरमा ल्याइएको छ। किनभने त्यहाँ केही समयदेखि धुम्रपानको दर घटेको छैन। धुम्रपानको तथ्याङ्कलाई हेर्दा बेलायतको चेसायर पूर्वका गर्भवती महिलालाई पनि यो योजनामा ​​सामेल गरिएको छ।
योजना अनुसार त्यहाँ धुम्रपान छाड्नेलाई करिब ३० हजार र गर्भवती महिलाले धुम्रपान छाडेमा करिब ६० हजार रुपैयाँ दिइनेछ। यो योजना प्रभावकारी साबित भए देशका अन्य भागमा पनि लागु हुने बताइएको छ। विशेष कुरा के हो भने, यदि कुनै व्यक्तिले धुम्रपान छोडेको दाबी गर्छन् भने, उसले परीक्षणबाट गुज्रनुपर्नेछ। उनीहरुले आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्नका लागि एक्सहेल्ड कार्बन मोनोअक्साइड परीक्षण गराउनु पर्नेछ।
धुम्रपान छाड्नेलाई ३० हजार र गर्भवतीलाई ६० हजार रुपैयाँ दिइनेछ। चेशायर ईस्ट काउन्सिलको रिपोर्टले बताउँछ कि त्यहाँ बलियो प्रमाण छ कि वित्तीय प्रोत्साहन योजनाहरू धुम्रपान छोड्न चाहने मानिसहरूलाई मद्दत गर्ने एक प्रभावकारी तरिका हो। प्रतिवेदनका अनुसार दिनमा २० पटक धुम्रपान गर्ने व्यक्तिले धुम्रपानमा वार्षिक ७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्छन्।
यसबाहेक फोक्सोको क्यान्सर भएकामध्ये ७० प्रतिशत धुम्रपानसँग सम्बन्धित छन्। यसबाहेक धुम्रपानका कारण पनि धेरै रोग लाग्ने गर्दछ। प्रतिवेदन अनुसार यस योजनाका लागि करिब डेढ करोड रुपैयाँ पनि विनियोजन गरिएको छ। समितिले यो योजना साउनमा परिषदमा पेश गर्ने कुरा गरिरहेको छ।